Diyaarado raashin & dawo gaarsiiyey degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Labo diyaarad oo kaalmo sida ayaa maanta ka degay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan.
Raashinkaan oo ka kooban bariis, caano iyo dawo ayaa waxaa Muqdisho ka diray wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasaarada arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay billowday gargaar dhinaca hawada ah oo loo sameynayo dadka ku nool Buulo-burte, sida uu sheegay guddoomiyaha degmada Buulo-burte, Axmed Cabdi Weheliye.
Maamulka gobolka Hiiraan, kan degmada, saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay doonayaan in la isugu furo degmooyinka Beledweyne iyo Buulo-burte ee gobolka Hiiraan.
Dhawaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu caalamka ka codsaday in lagu taageero diyaaado kaalmooyinka lagu gaarsiiyo deegaanada dhawaanahan Alshabaab laga saaray, kadib markii Alshabaab go’doomiyeen qaar ka mid ah degmooyinkaas.